Dambudziko neWebhu 3.0 Inoenderera | Martech Zone
Kuisa muchikamu, kusefa, kumaka, kuunganidza, kubvunza, kunongedza, kuronga, fomati, kuratidza, networking, kutevera, kuunganidza, kufarira, tweeting, kutsvaga, kugovana, kubhukimaka, kuchera, kugumbura, kugadzirisa, kubatanidza, kuteedzera, kupa ... zvinorwadza chaizvo.
Websaiti 0: Muna 1989 Tim Berners-Lee weCERN anotsvaga Internet yakavhurika. Webhusaiti yekutanga inoonekwa muna 1991 neWorld Wide Web Project.
Websaiti 1.0: Na1999 kune mamirioni matatu mawebhusaiti uye vashandisi vanofamba nenzira huru neshoko-remuromo uye madhairekitori seYahoo!
Websaiti 2.0: Pakazosvika 2006 pane 85 mamirioni masaiti asi masayiti anopindirana, wikis uye midhiya enhau anotanga kuumbika uko vashandisi vanogona kutora chikamu mukuvandudza zvemukati.
Websaiti 3.0: Na2014, mawebhusaiti anodarika bhiriyoni aripo nekutsvaga kwekutsvaga uye masisitimu ekutaurirana, kunyanya nekuti yakanyatsogadziriswa uye kumakwa kumatekinoroji kumutengi, index, uye kuwana ruzivo kune vashandisi.
Websaiti 4.0: Tiri kupinda muchikamu chinotevera cheInternet uko zvese zvakabatana, masystem ari ekuzvidzidzira-kudzidza, zvinodiwa zvinoenderana uye zvakagadziridzwa, uye dandemutande rinove rakarukwa muhupenyu hwedu sekugovewa kwesimba kwakaitwa pamusoro pezana ramakore rapfuura.
Ndakafanotaura kuti 2010 raizove gore ra kusefa, kuita zvemunhu, uye kugadzirisa. Nhasi, handina chokwadi chekuti tatova padyo padyo - tinogona kunge tichiri makore ekuenda. Chinokosha ndechekuti tinochida ikozvino, zvakadaro. Ruzha rwacho rwuri kutovhara.
Zvirongwa zvekushambadzira, huchenjeri hwekunyepedzera, uye kudzidza kwemuchina zvese zviri kuendeswa mugore kuyedza kugadzirisa kukosha uye kunangana kwekutaurirana. Pane nyaya ndeyekuti aya ndiwo ese matekinoroji anotumirwa nemakambani kudzora kutaurirana kumushandisi wekupedzisira. Izvi zvinodzokera kumashure… tinoda masisitimu apo mushandisi anogona kudzora zviri nyore ruzivo rwavanodyiswa uye nemadyiro avanoitwa.
Google ine makore makumi maviri ekuberekwa uye ichingori a kutsvaga injini, ichingokupa iwe mbeveve data yakamisikidzwa pamazwi akakosha anoenderana nemibvunzo yako. Ndinoda chaizvo munhu wekuvaka tsvaga injini inotevera… Ndaneta nekutsvaga, hauna iwe? Ndinovimba, iyo kutorwa kwemazhinji kwetekinoroji yezwi ichatyaira hunyanzvi munhandare iyi - handifungidzire kuti vatengi vanozove nemoyo murefu vachitenderera kuburikidza nemhedzisiro yakawanda kuti vawane iyo yavari kutsvaga.
Makambani akaita seFirefox, Google, uye Apple vanogona kunge vari kubatsira. Na kutadza kuteedzera kushambadza kwakaremara pakuiswa, inoisa mutoro mumaoko emushandisi. Semunhu mushambadzi, zvinogona kurira senge nzungu kwandiri kuti ndida kuti vatengi nemabhizinesi varege kunditeerera. Asi kana ndisina basa uye ndichigumbura, ndizvo chaizvo zvavanofanira kuita. Vatengesi vachiri kugara vachitadza kutumira iwo meseji kune wese munhu uyezve voita segmenting uye kunatsa meseji.
GDPR inogona zvakare kubatsira. Ini handina zano rekuti kukanganisa kwakadii kutanga GDPR opt-in mameseji pamakambani, asi ini ndinonzwa kuti zvaiparadza. Kunyange ini ndichifunga kuti rairema-ruoko, zvichanyatso kuita vashambadzi varinani kubva kwatiri. Dai isu taive nehanya zvechokwadi nezvese meseji yataitumira, pataive tichitumira, uye kukosha kwazvakaunza kune yega tarisiro kana mutengi - Ndine chokwadi chekuti tinotumira chidimbu chavo. Uye kana vatengi vasina kubhombwa, vanogona kusasundira mutemo unorema-ruoko seizvi.
Ini ndinofunga tekinoroji makambani anoteerera uye anobata tarisiro uye vatengi neruremekedzo rwakafanira, vachiona kukosha kuburikidza nekutaurirana, vanozopedzisira vave ivo vanokunda veWebhu 3.0. Zvikasadaro, isu tiri kudhiraivha muWebhu 4.0 (Internet yezvinhu) isina yekuchengetedza mambure.
Tags: kuunganidzabookmarkKurongakuunganidzadiggingkucherazvinoteverakuumbakusimbisaindexinglikingnetworkingkubvunzakutsvagasemantic webhukugoveranakusarudzakurongekarinogumburataggingtweeting3 web3.0 web
Ndeapi Akanaka Meseji Mameseji Kakawanda?
Ndaedza kukuvakira injini yekutsvaga. Panzvimbo pekuvimba nemakomputa kusefa isina kurongeka dhata inoenderana newe, injini yekuwana inotsamira pasocial network yako.
Keyword overload yakagadzira chikara cheFrankenstein chekuoma. Ikozvino hazvina kukwana kuti bhizinesi diki rive newebhusaiti, ivo vanofanirwa kuve neSEO nyanzvi yekumisikidza yavo zvirimo uye metadata kufadza Google's algorithms. Uku kupenga.
Ndinovimba kuti Right-Nguva matekinoroji anosanganisira angu achakubatsira iwe * kuwana* zvaunoda, paunoda uye isu tinogona kutiza keyword hero.
Pindura kana uchida kuziva zvakawanda. Handidi kukutumira spam nezita rekambani yangu kana webhusaiti. Izvo zvese nezve "opt-in".
Can't believe kuti hauna kana kundipa citation 😉
Wakambonzwa nezveWolfram Alpha? (http://www.wolframalpha.com/) Ndiyo "tsvaga injini."
Hi Cassie! Ini ndinofunga Wolfram idanho chairo munzira chaiyo!
Handibvumirani zvachose. Ehe, data rakawandisa kana ukashandisa echinyakare manhamba matekiniki ematambudziko emantic. Google inoita izvi - zvichikonzera miswe mirefu yemigumisiro uye vashandisi vakavhiringidzika.
Iwo ari kubuda minda yeadaptive heuristics ane zvakanyanya kushanda kune semantics pane izvo zvinokurukurwa muvhidhiyo.
Zvimwe zvekutevera… Tiri kushanda nazvo izvozvi.